ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ကိုယ်ဝန် ခုနှစ်လ ရှိနေသော ဇနီးသည်၏ ဗိုက်ကို ကန်ပြီး ၀ါးရင်းတုတ်ဖြင့်ရိုက်၊ ဇနီးသည်က ဓားဖြင့် ပြန်ခုတ်၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံး – WunYan
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ကိုယ်ဝန် ခုနှစ်လ ရှိနေသော ဇနီးသည်၏ ဗိုက်ကို ကန်ပြီး ၀ါးရင်းတုတ်ဖြင့်ရိုက်၊ ဇနီးသည်က ဓားဖြင့် ပြန်ခုတ်၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံး
whuk-46651 | March 12, 2018 | Crime News | No Comments
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ က ကိုယ်ဝန် ခုနှစ်လ ရှိနေသော ဇနီးသည်၏ ဗိုက်ကို ကန်ပြီး ၀ါးရင်းတုတ်ဖြင့်ရိုက်သောကြောင့် ဇနီးသည်က ဓားဖြင့်ပြန်ခုတ်၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သေဆုံးခဲ့သည့် အမှုတစ်ခု မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ ခရမ်းစပ်ကျေးရွာ ၊ နတ်ကျောက်အိုး တောတိုက်၊ နှီးစခန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
မတ်လ ၁၁ ရက်၊ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ အချိန်က ခရမ်းစပ် ကျေးရွာ နတ်ကျောက်အိုး တောတိုက်၊ နှီးစခန်း၌ ကို…. (၃၂) နှစ်၊ ၄င်း၏ ဇနီး မ…… (၃၃) နှစ်တို့ လင်းမယားချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ရန်ဖြစ်စဉ် ကို….. (၃၂) နှစ်က၊ ကိုယ်ဝန် (၇) လခန့်ရှိ ဇနီးဖြစ်သူ မ….. (၃၃) နှစ်၏ ဝမ်းဗိုက်အား ကန်ခဲ့ပြီး ဝါးရင်းတုတ်ဖြင့် ထပ်မံရိုက်နေ သောကြောင့် မ…. (၃၃) နှစ်က လက်ထဲတွင် အသင့်ရှိနေသည့် နှီးထိုးဓားဖြင့် ခုတ်ခဲ့၍ ကို… (၃၂) နှစ်တွင် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊
ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ ကို… (၃၂) နှစ်ကို ဓားဖြင့်ခုတ်ခဲ့သူ ဇနီး နှင့် အမျိုးသား တစ်ဦးတို့က ထော်လာဂျီဖြင့် တင်ဆောင်၍ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ကုတင် (၁၀၀) ဆေးရုံ သို့ ပို့ဆောင်စဉ် ကို… (၃၂) နှစ်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း၊ ခင်ပွန်းသည်အား ဓားဖြင့်ခုတ်သည်ဆိုသော မ …(၃၂) နှစ်အား ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူထား ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
Source : The Asia Heart News
ခငျပှနျးဖွဈသူက ကိုယျဝနျ ခုနှဈလ ရှိနသေော ဇနီးသညျ၏ ဗိုကျကို ကနျပွီး ၀ါးရငျးတုတျဖွငျ့ရိုကျ၊ ဇနီးသညျက ဓားဖွငျ့ ပွနျခုတျ၍ ခငျပှနျးဖွဈသူ သဆေုံး
ခငျပှနျးဖွဈသူ က ကိုယျဝနျ ခုနှဈလ ရှိနသေော ဇနီးသညျ၏ ဗိုကျကို ကနျပွီး ၀ါးရငျးတုတျဖွငျ့ရိုကျသောကွောငျ့ ဇနီးသညျက ဓားဖွငျ့ပွနျခုတျ၍ ခငျပှနျးဖွဈသူ သဆေုံးခဲ့သညျ့ အမှုတဈခု မတျလ ၁၁ ရကျနကေ့ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ သပိတျကငျြးမွို့နယျ၊ ခရမျးစပျကြေးရှာ ၊ နတျကြောကျအိုး တောတိုကျ၊ နှီးစခနျးတှငျ ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့က သတငျး ထုတျပွနျသညျ။
မတျလ ၁၁ ရကျ၊ မှနျးတညျ့ ၁၂ နာရီ အခြိနျက ခရမျးစပျ ကြေးရှာ နတျကြောကျအိုး တောတိုကျ၊ နှီးစခနျး၌ ကို…. (၃၂) နှဈ၊ ၄ငျး၏ ဇနီး မ…… (၃၃) နှဈတို့ လငျးမယားခငျြး စကားမြား ရနျဖွဈခဲ့ကွောငျး၊ ထိုသို့ ရနျဖွဈစဉျ ကို….. (၃၂) နှဈက၊ ကိုယျဝနျ (၇) လခနျ့ရှိ ဇနီးဖွဈသူ မ….. (၃၃) နှဈ၏ ဝမျးဗိုကျအား ကနျခဲ့ပွီး ဝါးရငျးတုတျဖွငျ့ ထပျမံရိုကျနေ သောကွောငျ့ မ…. (၃၃) နှဈက လကျထဲတှငျ အသငျ့ရှိနသေညျ့ နှီးထိုးဓားဖွငျ့ ခုတျခဲ့၍ ကို… (၃၂) နှဈတှငျ ဒဏျရာမြား ရရှိခဲ့ကွောငျး၊
ဒဏျရာရရှိခဲ့သူ ကို… (၃၂) နှဈကို ဓားဖွငျ့ခုတျခဲ့သူ ဇနီး နှငျ့ အမြိုးသား တဈဦးတို့က ထျောလာဂြီဖွငျ့ တငျဆောငျ၍ ကနျ့ဘလူမွို့နယျ၊ ကုတငျ (၁၀၀) ဆေးရုံ သို့ ပို့ဆောငျစဉျ ကို… (၃၂) နှဈမှာ သဆေုံးသှားခဲ့ကွောငျး၊ ခငျပှနျးသညျအား ဓားဖွငျ့ခုတျသညျဆိုသော မ …(၃၂) နှဈအား ဥပဒနှေငျ့အညီ အရေးယူထား ကွောငျး မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့က သတငျး ထုတျပွနျသညျ။
ယနေ့ညနေ တောင်ကြီးမြို့တွင် တန်ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မီးပုံးပျံ ယမ်းပြုလုပ်ရာမှ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွား
၁၃ နှစ်သမီး နှိပ်စက်ခံရမှုကို သာမန်နာကျင်စေမှုအဖြစ် ဆက်စစ်မည်
ပေါင်​မြို့၌ ယောက်ျားလေးချင်း သက်ငယ် မုဒိန်းမှုဖြစ်ပွား